Ukubaluleka Amagama — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
amazwi abalulekileyo. Sisebenzisa amagama ukunxibelelana nabahlobo kunye nentsapho yethu. Sisebenzisa amagama zethu ukuba aqhube ishishini. Ndisebenzisa amagama ukuba kunye iingoma ukuziphilisa. Sisebenzisa amagama ukuqeqesha abantwana bethu. Abezopolitiko ukusebenzisa amazwi kuwe baqiniseke ukuba nguwe mgqatswa ilungileyo umsebenzi. Amazwi yinxalenye omkhulu kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. Ndiya kuba unyana olutsha. Kunzima ukuphila umntu iiveki ezisixhenxe ubudala, ikakhulu kuba abakwazi ukuthetha. Ngoko amaxesha ndifuna ukumnceda kodwa andazi ukuba njani kuba akakwazi ukunxibelelana ngamazwi kodwa. Kunzima ukuba nomfanekiso ihlabathi ngaphandle amazwi.
Umntu avareji ikuthethayo 16,000 Amazwi ngosuku. Yiloo 112,000 amagama veki nganye. Oko phezu amazwi kwezigidi ezihlanu ngonyaka ngamnye. Sisebenzisa amagama. Okuninzi.
Kwaye nantoni na kukho eninzi uqalisa ukuba awuxatyiswanga. Ixabiso into utshintsho olusekelwe kangakanani kwalo kukho. Xa kukho 100 cookies phezu kwetafile emva kwenkonzo unokuqhubeka ukuthetha okwethutyana. Kodwa xa kukho cookies nje ezimbalwa, bakhangeleka anqabileyo. Mhlawumbi oya Akunakukhawuleza khona kwaye ukuba ufumana esinye ngexesha, ezilumayo leyo kakhulu enencasa. Kuba siyeva usebenzise amagama amaninzi yonke imihla azithethi lukhulu kuthi. Kodwa simele kubabona njengokuba anqabileyo.
Mhlawumbi sicinga kuphela izinto ezibalulekileyo ngokwenene bathi ebalulekileyo. Mhlawumbi sicinga kuphela oko babhale phantsi, okanye kuphela xa ancokole nebe okanye kuphela xa sisithi oko ngokwenene ukuba amazwi ethu Akukhathaliseki. Ndicinga ivesi kwethu ngokuhlwanje uthetha into eyahlukileyo. Jika nam kuMateyu 12:36.
Ke mna ndithi kuni, ukuba abantu baya kuziphendulela ngoMhla woMgwebo ngenxa lonke ilizwi engaqondanga ndithethile. (Mateyu 12:36)
UYesu uthi la mazwi phakathi incoko nabaFarisi, emva kokuba nimmangalele ekhupha iidemon nguSathana. Kwaye nalapho uYesu uthi kubo ukuba sele ububi, kwaye abakwazi ukuthetha nantoni na elungileyo (yokuba nobubele indlela ngamazwi). Uthi ukuba onke amazwi bethu iziqhamo noko yendele ezintliziyweni zethu.
Kwaye ngoko ke ilahla ukuba ibhombu phezu kwethu. Oko kuya kufuneka kuziphendulela kuThixo onke amazwi zingakhathaliyo sithetha. Oku kusebenza kuphela ukuba abaFarisi. Iyinyaniso enye nganye kuthi. Kwaye vesi zilandelayo kunto zandothusa kakhulu. Uthi, "Kuba ngawo amazwi akho uya etyaleni, kwaye uya kugwetywa nangawo amazwi akho. " Kodwa kutheni? Kutheni amazwi ethu ibaluleke kangaka? Kutheni siya wagwetyelwa okanye kugwetywa ngokusekelwe into engenamsebenzi njengoko amazwi sithi?
Wenza kwacaca ngaphambili xa Athi, "Ngenxa ephuphumayo kwentliziyo umlomo uthetha." Ngaba wakha waziva ngokungafanelekanga kugwetywa? Ngathi umntu obanjwe ngemini kakubi xa wena inqondo kwaye bagwetywe umlinganiswa yakho yonke ngaloo mini enye? Kakuhle ndisagwetywa ngamazwi ethu ayinjalo. Akufani amazwi yinkalo nje omnye umlinganiswa ukuba musa esichazayo. Ngokuchanileyo inokubonwa ngamazwi ethu kuba mbono uchanekileyo oko ntoni ezintliziyweni zethu.
Yinto phantse ngathi mna ephethe ikomityi, ukuba andazi yintoni apho. Ndikwazi ndithi kuni amanzi apho, okanye incindi na apho. Kodwa ukuba mna atripe aze atshize okanye achithe ezinye nabanxilayo, uyakwazi ncam yintoni apho. Yinto efanayo ngamazwi zethu iintliziyo zethu. Xa sithetha, okuqulethwe iintliziyo zethu gabhu ngaphandle. amazwi ethu singabonisa yintoni ezintliziyweni zethu, nokuba zilungile nokuba zimbi. Ke kaloku uPawulos yiTripp, Umbhali ndafunda le veki, wathi, "zange wathetha ilizwi cala ebomini bakho."
Kubanjwa ngamazwi ethu
Wonke ngoku ke umntu ndibhaqwe kwi tape esithi into ngekungazange wathi zikarhulumente. Oku kwenzeka uMongameli Obama xa wayethetha kuMongameli yaseRashiya. Oku kwenzeka Mitt Romney kwiveki yokugqibela. Abazange alindele ukuba kuphenduliswa abo mazwi, kodwa ke. Ngokufanayo, sicinga asiyi kuba uxanduva amagama athile sithetha. Sicinga sisithi izinto, kwaye kwenziwe it's, kodwa baya kubuyela nomntana kuthi. Nto ngathi uThixo iikhamera ezifihlakeleyo yonke indalo.
Kukho ngosuku - itekisi ithi iMini Yomgwebo - xa siya kuma phambi uMgwebi engcwele yonke iphela. Kwaye xa Amazwi wethu liya kuma kwi njengamangqina - nokuba ndingqina kuthi okanye ngokuchasene nathi. Ubungqina iya kuboniswa.
UThixo uya kujonga indlela ebesilithetha abazali bethu usengumntwana kwindlela esithetha ngayo amaqabane ethu okanye nabaqashi abadala. UThixo uya sihlolisise indlela ebesilithetha ongabaziyo kwi esitratweni. UThixo uya kuphanda iziqhulo samxelela yethu intsebenziswano-abasebenzi. UThixo uya ku kamana ngokusebenzisa kwiivenkile zethu onomsindo yezithuthi kwi drive ukusebenza. Ke ndiza uyaskrola into echwethezwe Facebook kunye Twitter. Nkqu amagama ukuthumela imiyalezo okanye imeyile. Lonke ilizwi elinye.
Ubona uYesu ukuthi kuza kufuneka unike inkcaza amazwi abalulekileyo sithetha. Uthi, "Lonke ilizwi zingakhathaliyo." Igama elithi Ozidelayo Kwakhona iguqulelwe lavuza okanye lungenamsebenzi. yonke intetho, kungakhathaliseki ukuba ucinga ukuba awubalulekanga ngayo. I-ukwazi uThixo wathetha ngale ntsasa, wazi zonke ilizwi Ndiye siya kuze uthethe.
Yaye nantsi into. enye nje ilizwi abangahloneli kwanele ukuba asigwebe. Nguwuphi khondo kuthetha, sonke kufuneka phantsi amagama ethu.
Kaloku kukho amagama amathathu, nithethe ngalo iNkosi uYesu Kristu, ukuba uthathe lonke ilizwi zingakhathaliyo Ndakhe ndakhe ndithethile. Loo mazwi ezintathu "Oku. Ingaba. Kugqityiwe. "Emva kokuba waphila ubomi obugqibeleleyo, emva kokuba kusetyenziswa amazwi akhe kuphela ngendlela azukiswe uThixo, UYesu waya emnqamlezweni. Uthe ke waxhonywa kuloo mnqamlezo, wafa ngenxa yezono intetho yethu. Ke yena wavuka kwiintsuku ezintathu kamva.
Yaye abo kuthi nokholo lwethu kuKristu, ewe, kukho amazwi uyakha ndathetha ukuba zi ziqhamo ulwalamano lwethu kunye noKristu. Ke loo mazwi ndiqononondise ngakwicala lethu. Kodwa babeza kugwetywa ngawo onke amanye amagama. Nokudumisa uThixo ukuba negazi leNkosi uYesu ligubungela loo mazwi. Ukuba awuyazi uYesu, nabuya ezonweni zenu nabakholose kuphela onako ukuxolela kuni ubugwenxa benu bonke, kuquka izono intetho yakho.
Ngoko ke njengoko amakholwa, Nangona siya singasingelwa phantsi amagama ethu, siza kuqhubeka kuphenduliswa kubo. Siyakuba nangoku kuziphendulela kuThixo ngenxa kubo yaye ungaphulukana umvuzo Ezulwini.
Abanye bethu kakuhle kakhulu imali yethu. Senza uhlahlo, sibe nengqiqo zetsheke zethu, siyigcine iirisithi zethu, kwaye sijonga iingxelo zethu akhawunti online. Kaloku siyazi kakhulu ayintlanga. Thina siyazi ukuba ligosa kakuhle imali yethu.
Kulungile ukuba uhlobo olufanayo naxhala, ekubalwe kufuneka lisetyenziswe ngendlela ukusebenzisa amazwi ethu. Kuba kakhulu ayintlanga. Kwaye siya kuphendula kuThixo onke amazwi ethu. Sifanele njengamagosa alungileyo amazwi sisebenzisa.
amazwi ethu zifana nangezando. Sinako ngokungenankathalo Zijiwuzisele ngeenxa uzaphule iimpahla. Okanye ungasebenzisa kubo ukwakha ngononophelo iimpahla. Uza kuyisebenzisa njani amazwi akho kule veki? Indlela sasidla amazwi ethu kule veki igqithileyo mhlawumbi kusibonisa indlela ukuze siwasebenzisa kule veki izayo, kokuba utshintsho into.
Ngoko ndifuna ukunika iindlela ezintathu ukuba usebenzise kakuhle amazwi ethu.
mna. Thetha noThixo
Ye 16,000 esiwasebenzisayo amagama yonke imihla, siya kuba bubulumko ukusebenzisa ezininzi abo incoko noThixo. UYesu usinike kufikelela kuBawo, kwaye kufuneka eze ngenkalipho phambi kwetrone yakhe rhoqo. amaqabane ethu ukuze uneengxaki nje kukundiphulaphula, Kodwa uThixo a. Usoloko uyayiva imithandazo yethu. Inyaniso, Uyaphulaphula ngokusondeleyo kakhulu.
Rhoqo xa ukuyo into enzima, into yokuqala esikwenzayo balikhupha nje kubahlobo nosapho. Okanye mhlawumbi ive- nje ngokuvakalayo ngokwethu ukuba. Yinkcitha amazwi. veki iphelileyo, Mna ukhalaze umfazi wam ngento leyo kanye owawusandikhathaza ngokwenene kum mna wayeyixhalabele. Kwaye phambi kokuba livume okanye abenza naziphi na icebo, yena lasuka landicela nje kum, "Ngaba sele wena ethandaza ngayo?"Kwaye impendulo kwakungekho. Mna, ndabuya kuthetha kuThixo ngalo. Kumel 'ukuba ukusetyenziswa ngcono kakhulu amazwi am.
Ngokufuthi, ukukhupha ayenzi nto ngaphezu asenze yimadder. Yinto yinkcitha amazwi ngamanye. Kodwa uthetha kuThixo soze yinkcitha amazwi. Akukho ukusetyenziswa ngcono amazwi akho. Thina awukho phantsi kolawulo, kodwa Yena. Ngoko xa sifuna uncedo, endaweni yokuba nje ndibagezela, sifanele sithethe nje kuLowo ngubani ophetheyo. Kwaye ukuba kulungile kuthi, nangenxa yozuko lwakhe, Uya kusinika isicelo sethu.
Abanye bethu kuba lugcinwa. Kwaye xa si imiba nomntu, siye unelungelo umntu ukuba awugcine. Kufuneka sikhumbule ukuba uthetha kuThixo imeko kubaluleke kakhulu kwaye olusebenzayo kunokuba ukuthetha omnye umntu. Thetha noThixo malunga nemiba zakho ezinobume ngaphambi kokuba uthethe omnye umntu. Mcele uncedo kwaye ubabalo nobulumko. Vumela ubunzima uthetha uMdali wakho utywala kwaye akuncede ucinge ngokuhlakaniphileyo.
Yaye simele kuphela ukusebenzisa amazwi ethu ukucela kuThixo iimpahla. Le nto ke kufuneka umthandazo wendumiso yonke intsasa yangeCawa. Kufuneka kubulela nje kuye izihlandlo. Kufuneka livuleleke neendlela ezizodwa Nokulibethela uhadi bakhe. Ngaphezu nje, "Ulungile. Ndiyabulela kuThixo. "Intliziyo ukuba zizaliswe nokuthanda uThixo fumana iindlela ezintsha kunye nezizathu ezintsha ukudumisa uThixo yonke imihla. Nguye ufanelwe indumiso yethu.
II. Nizivakalise iindaba ezilungileyo
Andikwazi kucinga nto kungcono ukuba uxelele omnye umntu, ngaphezu Iindaba ezilungileyo. UThixo uthethile kule mihla yokugqibela ngoNyana wakhe, uYesu Kristu. Kwaye kufuneka axelele abanye ngaYe oko Wakwenzayo.
KwabaseRoma 10 isixelela ukuba, "Ukholo luza ngokuva ukuva ngalo ilizwi kaKristu." Ngale ndlela ke uThixo usindisa amadoda kunye nabasetyhini. Xa zisiva iVangeli balamkele ngokholo.
Ndifuna ukuba bacinge ngokuba okomzuzwana kuthethwa umntu ebomini bakho ifuna ukuva iVangeli. Ingaba ilungu losapho, umlingane, ummelwane, ngumchebi, ugqirha? Yintoni umntu ebomini bakho ifuna ukuva iVangeli?
Yinto entle kuthi ukusebenzisa amazwi ethu ukwakha ubudlelwane kunye ovumelana kunye nabahlobo bethu non-abangamaKristu. Yinto kubalungele ukuba bathe bazi ukuba umkhathalele ngabo. Kodwa etshabalalisayo ukuba singangaze okunene Jikela ukwabelana iVangeli nabo. Bekuya kuba buhlungu ngendlela if siye 10 sincokola malunga nezopolitiko, kodwa akukho namnye malunga yeVangeli. Bekuya kuba buhlungu xa si ncokola ngeveki ngemidlalo, kodwa zange nayiphi na ingxoxo ngoYesu. Kwaye ndithetha ngam.
kutshanje, Kwafuneka amalungu osapho kufa. Kwaye xa kusenzeka, oko kundikhumbuza, ukuba amanye amaxesha kulungile ukuba alinde, kodwa ngamanye amaxesha kufuneka ukuba ukuxelela abantu ngoYesu ngoku. Ndiyazi isikreqo sam alunakuyithintela izicwangciso kaThixo, kodwa oko akuthethi ukuba kufuneka kwabangevayo. Yaye zonke, silandele ukhokelo loMoya, kodwa uyazi ukuba soze kusikhokelela ukuba singazikhululi into ekufuneka ngoku wathi. Nizivakalise iindaba ezilungileyo.
Oku akuthethi ukuba kufuneka ukuba kubekho intsebenziswano yethu kuphela non-amaKristu. Kodwa oko kuthetha ukuba kufuneka kwenzeke. Mhlawumbi kufuneka awazise ecaweni kwaye usebenzise intshumayelo njenge ngokubhengezwa xa iphedi ukuthetha ngayo. Mhlawumbi sichaza ukuba incwadi elungileyo okanye cd othetha iVangeli (ahem, yam). Fumana indlela ukuxelela iVangeli.
III. Yakha Abanye (G- ufefe)
Musa ukuvumela nayiphi na intetho engcolileyo uphume emlonyeni wenu, kodwa ke kuphela into luncedo ukwakha abanye ukuya ngokweemfuno zabo, ukuze baxhamle abo bamphulaphulayo. (Efese 4:29)
Oko kumele ukuba kube siseko okhokela ngokubanzi ukuze ngamazwi ethu ukuba abanye abantu. Kuphela into luncedo ukwakha abanye. Kunjengokuba ndatshoyo ngaphambili, amazwi ethu zifana nangezando. Siza nawaphula iimpahla okanye ukwakha iimpahla. Kwaye kukho iitoni iindlela ukwakha abanye.
UYesu uthi, ukuba kufe umntu ongayifikeleliyo off ngasonka sodwa, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. UThixo uthethile amazwi ezixabisekileyo. Thina ke usamile loo mazwi ezixabisekileyo omnye komnye yonke ithuba sifumana.
Enye indlela ukhuthazo. Ndicinga ukuba oku yinto CHBC wenza kakuhle. Enyanisweni ndisifumene nomfazi wam nofifi xa wafika kuqala. "Ngaba nje kundikhuthaza malunga umbuzo ndambuza?"Kude phantsi iyasikhuthaza ukuba utsho. kukuqinisa abanye. Baxelele xa ubona ubungqina ubabalo lukaThixo ebomini babo. Isingqiniso uthando lwakho ngabo. Isingqiniso uthando lukaThixo ngabo.
Enye indlela mngeni omnye komnye. Asifanele sicinge "ukwakha" uthetha okufanayo cute, amagama afana nonefuthe. Ngamanye amaxesha kuzakha elijongeka Ngokukhalima, okanye ukulungiswa. Maxa wambi kube ngathi umngeni umzalwana okanye udade esithi ukuba baguquke isono. Le yenye yezinto senze ukuzibophelela Nyikilana Nenze - ukuhamba sonke ngokuthi ngamaxesha elungileyo zingandihambeli.
Kwaye kwenzeka ukuba kweli xesha uxokozelayo njenge ibandla ngoku. Kwaye sifuna wamkhuthaza amagama umngeni. Khuthaza abazalwana noodade bakho yeVangeli. Bakhumbuze ulongamo lukaThixo nokulunga kwakhe nezithembiso zakhe. Kwaye umngeni abazalwana noodade bakho ukulwa umlo omhle wokholo, sinyamezele ekuthembeleni uYesu. Sidinga ukuba.
Enye indlela ukwakha abanye ngokupha icebo elilungileyo. Abaziingcibi sigqibo aqolileyo abo musa ukwenza izigqibo ngokuzimeleyo. Kufumaneka ukuva ngoko kuqhubeka umzalwana wakho okanye ubomi dade. Kwaye sincede ukuba bacinge ngokusebenzisa indlela uThixo wayeza kuba zisabela. Yokululeka yeBhayibhile.
Kwisandle esinye, njengoko ibandla, senza umsebenzi omkhulu Sincokola kakuhle ngokomoya. Kwelinye icala, usoyika ukuthetha ngaphandle uYesu izinto thina. Simele sithethe ngobomi, yaye ukuthetha ngemidlalo, yenze ngendlela ezukisa uThixo.
Abanye kufuneka uyeke kangaka ukuthetha nabanye kufuneka baqale ukuthetha ngaphezulu. Abanye bethu kufuneka zikhawuleze ukuva. Abanye bethu Ungaze usebenzise nayiphi na amazwi. Kwaye kufuneka senze okungakumbi. Thetha uviwe. UThixo esebenza ebomini bakho yaye sifuna ukuva ngayo. Mabandibuyele onke amazwi akho kubalulwa luthando. Umthandazo wam kukuba CHBC kuba ibandla luphawulwa Amazwi nothando.
Njengoko ufuna ukusebenzisa oko ndabeva ngokuhlwanje, musa ukwenza impazamo nje uzama ukugcina uphawu lwe nto uyithethayo uzama nje ukwenza ngcono. Musa nje ukuwulwa kuphela ngaphandle.
Njengoko sibona ngaphambili kumbhalo, into ogcinelwe ezintliziyweni zethu uphuma. Asifanele sicinge kukho qhawula uqhagamshelwano phakathi intliziyo kunye nolwimi. Ngoko agcine izinto ezintle entliziyweni yakho ndibakhangele ukuphuphuma. Ke xa loo, nantsi indlela sifanele sizabalazela ukusebenzisa amazwi ethu.
Indlela eyiyo ukubukela amazwi akho ukubukela iintliziyo zenu ngenxa yokuba ngokusondeleyo qha. Kukho umgca ngqo ngokwentliziyo ulwimi. Bukela intliziyo yakho, kwaye ngokwenza oko, ukubukela amazwi akho. Kwaye wenze konke oku ngokubukela iLizwi.
francismewa • EyeNkanga 22, 2014 ngexesha 3:10 mna • impendulo
kumnandi ukufunda malunga nexabiso yamazwi . Mna wacaphula izinto ezintle kule , enkosi amazwi intle
manicle • EyoMdumba 3, 2015 ngexesha 3:43 mna • impendulo
oku kuhle kakhulu. ukuba kuphela wonke umntu owayeza kuzifunda, ukuqonda kwaye ulandele imigaqo, ihlabathi laliza kuba yindawo engcono ukuhlala.
uncumo • EyeDwarha 24, 2015 ngexesha 9:22 mna • impendulo
sisebenzisa amagama kakhulu
rita • EyeNkanga 4, 2015 ngexesha 4:25 pm • impendulo
Le yaba ngexesha isifundo kum. Besithetha ngalo ngokuhlwanje kuxhomekeke kakhulu isifundo seBhayibhile. Bulela uThixo tsalela kwi website yakho Enkosi uThixo usebenzisa ukuba ukucacisa ilizwi lakhe ngendlela yayicacile kwaye lula.
God Service wakho!
Barbara • EyoMdumba 5, 2016 ngexesha 6:03 pm • impendulo
Amazwi ngokwenene kubalulekile. info Good. Nceda thatha ixesha kutyelela website wam uThixo uye undinike ubulungiseleli ukufundisa abanye ngokubaluleka amazwi.
Khankanya: Amazwi ubuncinane isiqingatha ubunyani bomntu ukuba eyona
Khankanya: 2016 in Review – My Job Hunting Experience | I SharePoint Effect
Khankanya: amagama – banana Wifey
Khankanya: Shumayela / yenkumbulo / James 3 / Amandla The Word